Beads Standard China Manufacturer
Description:Glass Beads Standard,Pikantsary fanenon-jiro,Kitapo fehiloha fanoratana ho an'ny famantarana famantarana
Home > Products > Intermix Glass Beads > Beads Standard
Ny kirantsika fitaratra avo indrindra; Ireo kavina dia manolotra ny fahombiazany sy ny faharetany amin'ny alàlan'ny tendan-tsakafony tena izy ireo, ny fampidiran-drivotra lehibe kokoa. Size 12-30 US mesh, 600-1700 Microns. Ireo dia somary lehibe kokoa noho ireo vatosokay. Ny fampiasana dia ny parking, ny fifamoivoizana sy ny seranam-piaramanidina, ny famantarana, ny zavakanto, ny asa tanana, ny sary hosodoko ary ny hafa. Ny kavina dia ny karazana I, izay misy sanda 1.5.
Ny CHIYE GLASS BEAD (HEBEI) CO., LTD dia natsangana tamin'ny taona 1998. Nandritra ny fitarihana ny filoha Wenjie Liu sy ny ezaka tsy nitaky ny mpiasa rehetra, dia namboarina avy amina orinasa tsy miankina iray ho perla vita amin'ny perla vita amin'ny vera. Ny orinasa dia manana orinasa famolavolana tetikasa mihoatra ny 38, fa tsy ny singa voalohany tamin'ny vokatra 200.000MT. Ny fitaovana fametrahana stereo ho an'ny stereo lehibe indrindra, rafitra feno automatique, rafitra sy famolavolana, dia tanteraka tanteraka ny famokarana sy ny fitantanana automatique. Ny orinasa dia manana ny laboratoara fikarohana tanteraka indrindra ary afaka manatanteraka tsy tapaka ny endriky ny fanandramana finday rehetra mba hamenoana ny teknolojia vaovao sy ny vokatra vaovao.
Mitondra fanamafisana sy fanohanana goavana i Chiye, ho an'ny ezaka amin'ny fijinjana, ho an'ny fahamendrehan'ny laza, ho an'ny orinasa goavana ho an'ny be marenina be voninahitra, hiantsorantsika am-pahaizana vahiny sy vahiny mba hitsidika ny orinasa ary i Chiye dia maniry ny hiara-hiasa aminao ary hahazo ny ho avy miaraka.
Be herema Contact Now
High Glass Reflective Glasses ho an'ny Roadmarking Contact Now
Kitapoopy miboridana avo lenta Contact Now
Glass Beads Standard Pikantsary fanenon-jiro Kitapo fehiloha fanoratana ho an'ny famantarana famantarana Glass Beads Sand Blasting Perila Glass Glass Standard Brick Glass Standards Gass Beads Glass Beads for Machine